“Mingalar Nya Nay Khin Par” | Mandalay FM Radio
“Mingalar Nya Nay Khin Par”
Zar Ni & Nay Nay
မန္တလေးFM က ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ (၁)ရက်နေ့စလို့ ဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာညနေခင်းပါ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ရေဒီယိုစကားဝိုင်းကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ညနေ(၄)နာရီကနေ (၇)နာရီထိ တင်ဆက်သူ ကိုဇာနည် နဲ့ နေနေ တို့က ရေဒီယိုချစ်ပရိသတ်တွေကို အမြဲကြိုဆိုလျက်ပါ။
ယာဉ်လမ်းအသုံးပြုသူတွေသိသင့်တဲ့ မြို့တွင်းယာဉ်ကြောအခြေအနေသတင်းတွေနဲ့အတူ ရေဒီယိုပရိသတ်တွေကြိုက်မယ့် ဂီတအနုပညာရှင်တို့ရဲ့ တိုက်ရိုက်သီဆိုပြတဲ့ Live Performance၊ Women Panel၊ Men Panel၊ Music Quiz၊ အချစ်ရေဒီယို၊ စာပေစကားဝိုင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပက အနုပညာသတင်းတွေအပြင် အချိန်နဲ့အညီသတင်းပေးသွားမယ့် နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေ စတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို မင်္ဂလာညနေခင်းပါ အစီအစဉ်မှာ နားဆင်ရမှာပါ။ အချိန်နဲ့အညီအမြဲအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းပါ အဖွဲ့သားတွေအားလုံးက မန္တလေးFM ရေဒီယိုကို နားဆင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
We bet You have Fun to
We bet You have Fun to Listen !
Every Mon to Fri at 4pm to 7pm
Evening Show " Mingalar Nya Nay Khin Par " is the very first live radio show in myanmar since 2013 May.You will enjoy their varitey contents such as " Current Affairs " , ' Women Panel ' , ' Live Performance on Radio ' and
' Music Quiz ' and so on.We always Listen your stories, please share!!!